August 2019 - Boga Wise Man
Xagay Sartu Ka Qudhuntay?
Hadraawi oo dhibta ina haysata kawaramaya hordhacii maansada Daba Huwan ayaa sheegay in dhibta kolba meel aanay ku jirin laynoo tilmaamo. Diktaatoor Dimuqraadiyad la’aan Qabyaalad Maamul xumo Aqoon darro Balse sida uu sheegay dhibtu waa nidaamkeenii oo gumeystuhu burburiyey, kadibna inoogu bedelay nidaam ina ragaadiya oo isagu leeyay. Sida abwaanku sheegay, illaa uu Ingiriiska tegay […]
Kala-Maan: Qaybtii 7aad.
Jimcaale ayaa ku horeeyey oo ku dhiiraday inuu ka jawaabo su’aashii Canab. Dib ayuu ugu tiirsaday kursigii uu ku fadhiyey kadibna ku yidhi. Jimcaale: Anigu waxaan ku fiicanay oo Alle i siiyey fahmo degdega oo qoto dheer. Haday noqoto inaan dadka fahmo iyo haday noqoto inaan buugta fahmo ama cilmiga barto. Isla markiiba Daadir ayaa […]
Kala-Maan: Qaybta 6aad
Canab: Waxaan moodayay inay ragu wax doortaan dumarkuna aqbal ama diidmo leeyihiin. Daadir: Maya caawa idinkaanu idin tijaabinaynaa. Rooda: Anigu weligeyba nin ma dooran. Canab: Haa dee aduu soodiga magiciisii la socday ilaa qiyaamihii. Rooda waxay si cadho leh u jaleecday Canab. Canabna qosol ayay isku dhaafisay. Rooda: Alla dee inantu run bay mooday kaftankii. […]
Dawlada Somaliland Cashuurta Ha Joojiso
Dawlada Somaliland way ka maarmi kartaa cashuurta.
Xisaabta iyo Siyaasada
Marka jiil-kaygu soo gaadhaan inay talada Somaliland qabtaan waxaynu u baahanay hogaamiye takhasuskiisu xisaabta yahay ama aad ugu fiican xisaabta. Sababta aan u doortay maadadan xisaabtu waa waxay maskaxda u diyaarisaa inuu qofku fahmi karo maado kasta oo kale. Haday noqoto dhaqaale dejin, haday noqoto dhaliilida nidaamada dhaqaale ee gaalada, haday noqoto odoroska iyo koboca […]
Nidaam Khaldan Mise Hogaamiye Khaldan?
Wadamada ribadu xalaasha ka tahay, dadku siday u kala hayn ama dhaqaale yaryhiin ayaa ribadana loogu qaaliyeeyaa. Iyadoo la leeyahay kani waxa laga yaabaa inuu deynta bixin kari waayee isaga ribadiisu waa inay ja sareysaa ka deynta iska bixin kara ama ka xoolo badan. Tusaale ahaan, nin tijaar weyn ah haduu bangi u tago oo […]